प्रदेश – Page 343 – Halkaro
फोनिज चितवनको नयाँ कार्यसमितिले समाल्यो कार्यभार
चितवन । नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ (फोनिज) चितवनको नवनिर्बाचित कार्यसमितिले बिहीबारबाट कार्यभार सम्हालेको छ । बिहीबार भरतपुरमा निबर्तमान कार्यसमितिले नयाँ कार्यसमितिलाई पद हस्तान्तरण गरेसगै नयँ कार्यसमितिले आगामी तीन वर्षका लागि आधिकारिक रूपमै कार्यभार सम्हालेका हुन् । नया नेतृत्वलाई कार्यभार सुम्पँदै फोनिज चितवनका निबर्तमान अध्यक्ष सन्तकुमार चौधरीले संस्थालाई बलियो बनाउनका लागि विगतका दिनहरूमा भन्दा राम्रो […]
प्रचण्ड सरकार अहिले सम्मकै पङ्गु सरकारः नेता खनाल
चितवन । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता एवंम् पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले प्रचण्ड सरकारलाई पंगु सरकारको संज्ञा दिनुभएको छ । चितवनको भरतपुर विमानस्थलमा बिहीबार पत्रकारहरुसंग कुराकानी गर्दै नेता खनालले वर्तमान सरकारले जनतालाई विश्वास दिलाउने कुनै पनि काम नगरेकाले सरकारको अस्तित्व समाप्त भएको बताउनुभयो । सरकार प्रति निकै आक्रोशित देखिनुभएका नेता खनालले यो सरकार […]
हुण्डाई ग्राण्ड चितवनमा सार्वजनिक
चितवन । चितवनमा ट भर्सनहुण्डाईको नया मोडल हुण्डाई ग्राण्ड आई १० को फेसलि सार्वजनिक गरिएको छ । चितवनको लागि हुण्डाइ गाडीको एक मात्र अधिकृत विक्रेता पिनाकल ट्रेडिङग कन्सर्न प्रा.ली. ले, भरतपुर स्थित सोरुम बाट एक समारोहका बिच ट भर्सनहुण्डाई ग्राण्ड आई १० को फेसलि सार्वजनिक गरेको हो । काठमाडौं यो नया मोडल सार्वजनिक भएसगै चितवनका […]
ट्याक्टरको ठक्करबाट दुर्इको मृत्यु दुर्इ घाइते
प्रकाशित मिति : २०७३, १६ चैत्र बुधबार
चितवन । बुधबार जिल्लाको भरतपुर महानगरपालिका वडा नं.३ भरतपुर ओरालोमा भएको दुर्घटनामा दुर्इ जनाको मृत्यु भएको छ । पुर्ब पश्चिम राजमार्गमा चौबिसकोठी बाट नारायणगढ तर्फ जादै गरेको ना ५ त ४२२३ नं.को ट्याक्टरले सडक किनारमा हिँडिरहेका पैदलयात्री र नारायणघाट बाट चौविसकोठी तर्फ आउदै गरेको ना २३ प ३९७ नं. को मो.सा. समेत लाई एक साथ […]
विक्रमबाबा मेला सुरु
प्रकाशित मिति : २०७३, १५ चैत्र मंगलवार
चितवन । नेपालकै पहिलो निकुञ्ज चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र लाग्ने एक मात्र विक्रम बाबा मेला मंगलबारदेखी सुरु भएको छ । चैते दशैंका अवसरमा लाग्ने मेलाको मंगलबार निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत रामचन्द्र कडेल र श्रीजङग गण कसराका प्रमुख सेनानी माधव थापाले संयुक्त रुपमा बिक्रमबाबाको पुजा आराधना गरी शुभारम्भ गरे । मंगलबारदेखि सुरु भएको मेला १५ दिनसम्म […]
मुग्लिन नारायणगढ सडकखण्ड दैनिक ६ घण्टाका लागि बन्द हुने
चितवन । राजधानीलाई देशको पूर्वी र पश्चिम भागसँग जोड्ने मुख्य सडक मार्गको रुपमा रहेको नारायणगढ–मुग्लिन सडक खण्ड मंगलबार देखि दैनिक ६ घण्टा बन्द गरिएको छ । नारायणगढ मुग्लिन सडक आयोजनाले सुचना जारी गरेर सडक बन्द हुने समय बढेको जानाकारी दिएको हो । सूचनाअनुसार आजबाट सो सडक खण्डमा बिहान १० बजेदेखि दिउंसो चार बजेसम्म गाडी चल्न […]
सामन्तवादी सोचका कारण महिला नेतृत्वमा आउन सकेनन्
चितवन । नेपाल महिला संघकी केन्द्रिय अध्यक्ष उमा रेग्मीले महिला शारिरिक र मानसिक दुबै पक्षमा बलियो रहेको भन्दै नेतृत्व लिन सक्ने बताएकीछिन् । पितृसत्ता र सामन्तवादी सोचले महिलालाई सेविकामा मात्र सिमित पारेको परिवेशलाई चिर्न हरेक तह र तप्कामा महिला मालिक बन्ने बेला आएको बताइन् । नेपाल महिला संघ चितवनले आयोजना गरेको महिला नेतृत्व विकास तथा […]
दुर्घटना न्यूनिकरणका लागि शिक्षकहरुलाई प्रशिक्षण
चितवन । जिल्ला ट्राफिक कार्यलय चितवनको आयोजनामा मंगलबार ट्राफिक शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ । हाम्रो अभियान सुरक्षीत र सहज आवागमन व्यवस्थापनमका लागि ट्राफिक शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम गरिएको जिल्ला ट्राफिक कार्यलय चितवनले जनाएको छ । समग्र नेपालमा बढदै गएको दुर्घटना र त्यसलाई न्युनिकरण गर्नका लागि कार्यक्रम गरिएको चितवनका ट्राफिक प्रमुख सन्तोष पन्तले बताउनुभयो । […]
मिसेस चितवनको उपाधि सुष्मा थापालाई
चितवन । मेडिकल सिटीको रुपमा चिनिएको चितवन त्यस पछि कुखुराको राजधानी भनिएर चिनीएको चितवन जिल्ला पूर्व पश्चिमलाई जोड्ने चितवन प्रतियोगिता प्रतियोगिताले नै भरीएको नामले पनि चिनीने भएको छ । यसको उधारण मिसेस चितवन २०१७ को उपाधि नारायणगढकी सुष्मा थापाले जितेकी छन् । दाताज् इभेन्टस्को आयोजनमा भएको प्रतिस्पर्धामा अन्तिम १९ जना मध्येबाट थापाले सो उपाधि जित्न […]